Miaro An’i Gaza Amin’ny Fampiasàna ny Sabatra Roalelan’ny Media Sosialy · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 12 Novambra 2015 1:19 GMT
Torapasik'i Gaza. Nalefan'ny mpanoratra azy, Gus, ho azo jeren'ny daholobe ito asa ito, tao amin'ny Wikipedia.
Fandanjalanjan-teny ny filazàna fa nahitàna fivoarana milamina ihany ny teknolojia sy ny serasera tao anatin'ireo taona vitsy. Niala tsikelikely tamin'ny naha-tanàna iray azy ny tany, noho ny “World Wide Web” (Vohikala Manerana ny Tany), ho lasa trano iray, noho ny media sosialy. Mety hiditra ao anatin'ny tantara miaraka amin'ny lohateny tokana—“Media Sosialy”— ny vanim-potoanantsika, satria tena nanova ny lalao io. Taloha, nikendry ny ho tafita amin'ny asa na fitiavana na zavatra hafa isika, fa vao haingana, ny ho lasa malaza amin'ny Aterineto no tena tanjontsika voalohany, ary ny hanao zavatra lehibe.
Mampiasa ny media sosialy ny olona ankehitriny amin'ny zavatra rehetra atao. Ny sasany mampiasa io amin'ny zavatra tsara, raha mampiasa io mba hanaovana zavatra mampalaza mihoapampana fotsiny ny hafa. Ho an'ireo fandraharahàna vaovao maro tokoa sy ireo orinasa kely vao misondrotra, fitaovana tokana hanaovana paikadim-barotra ny media sosialy.
Fa mety hoe, tsy hisalasalàna, ny “fanaovana gazety an'ny olon-tsotra” no tena asa lehibe nataon'ny media sosialy tato anatin'ny taona faramparany.
Miverina any amin'ny taona 2007, nanomboka nanaparitaka tsikelikely ny fisiako tao amin'ireo media sosialy aho, tamin'ny fanantenana ny hanjohy ny hrakoraky ny serasera, ary hanajanona ireo namako ny amin'ny fanadalàna ahy momba an'io ihany koa. Sady nahafinaritra no kilalao io, nandra-pahatongan'ny fanafihana voalohan'ny Israeliana an'i Gaza ny Desambra 2008. Tamin'izany, nampiasa matetika ny Facebook aho tamin'ny filalaovana ny Farmville (aza mitsara ahy, nanomboka ny faha roapolo taonako aho tamin'izany) ary nankany amin'ny famoronana ambohipihaonan'ireo vaovao malaza izay nanomboka nanintona ny fijery iraisam-pirenena. Kelikely foana, tamin'izany taona izany ihany, izaho no nanomboka voalohany nanao ny bilaogy amin'ny teny Anglisy tao Gaza, ary izany ihany koa no nanampy ny feoko ho tafita lavitra kokoa tany am-paravodilanitra lavitra. Fa mbola zazakelin'ny media sosialy vao nianatra nandeha ihany aho.
Avy eo tonga ilay tranga Mavi Marmara, raha nanafika sambo iray teny an-dàlana ho any Gaza saika hanapaka ny fahirano Israeliana i Israely. Mpikatroka mafana maro no maty sy naratra. Amin'ny maha mpanao gazety, nahazo fanavaozam-baovao mialoha aho mba hampiasaina ao amin'ny tatitra ataoko. Noho izany, nanapaka hevitra ny hametraka ny kaonty Twitter-ako aho — izay zara fa nampiasaiko tamin'ny tokony ho izy tamin'izany fotoana izany. Nanomboka nandefa ny vaovao rehetra hitako manokana tao amin'ny Aterineto aho, teo noho eo, tsy misy hatak'andro. Raha lazaina amin'ny fiteny hafa, “nibitsika mivantana” aho, fa tsy mbola nisy akory izany fomba fiteny izany tamin'izany. Nanomboka nahatsikaritra ny zavatra nataoko ny olona. Ary nihitatra ny ekipa mpanjohy ahy.
Avy eo, ny taona 2011, voakapoky ny karazana “revôlisiôna” tsy mbola nisy toa azy ny tany Arabo. Nanomboka tao Tonizia ary nikorisa tsikelikely tany Ejipta, Libya, Syria sy ny sisa. Amin'ny maha-Palestiniana ny tena, miaina eo ambany fibodoana sy fahirano, marary ho an'ny fahafahana, tsy maintsy tafiditra tamin'ireo fifanakalozana hevitra rezionaly aho. Noho izany, lasa mpampiasa fatratra ny media sosialy aho. Teo amin'ireo sehatra rehetra ao amin'ny Aterineto aho, amin'ny fotoana rehetra, na teo aza ireo fahatapahan'ny herinaratra nikapoka an'i Gaza efa an-taonany maro izao. Tsy maintsy nitady fomba aho hijanonana ho ara-baovao foana ary vonona lalandava, noho izany, nanomboka nijery fomba hijanonana tafiditra amin'ny Aterineto foana aho mandritra ireo fahatapahan-ny herinaratra, izay nanampy ahy tokoa nandritra ireo fahafihana ambiny nataon'ny Israeliana an'i Gaza ary tamin'i Palestina amin'ny ankapobeny.
Ny taona 2012, nisafidy ahy ny Firenena Mikambana handray anjara amin'ny fampiofanany isan-taona an'ireo Palestiniana mpanao gazety. Io no taona voalohany nijanonan'izy ireo tsy hifantoka fotsiny tamin'ireo haino aman-jery, ary nanomboka nifantoka bebe kokoa tamin'ny media niomerika sy sosialy. Nitondra ahy tany amin'ireo làlana mankany New York ny asako, izay nofinofy lasa tena izy. Raha jerena ny làlako amin'ny maha mpanao gazety ahy tany Gaza ary “olo-malaza” amin'ny media sosialy ao amin'ny fireneko, zavatra mazava be ho ahy ny nakàko ny hoe “Media Sosialy sy Fiarovana ny Fanaovana gazety” ho lohahevitra ho an'ny tetikasa fanofànako. Nomena alàlana hiditra tamin'ireo foiben'ny mpanazava amin'ny resaka vaovao sy media sosialy manerana ny tany aho, sahala amin'ny Twitter, Google, BBC, Reuters sy ireo maro hafa. Sahala amin'ny mamarana ny làlana, zavatra niainana tamin'ny fiainana izay nametraka fahaizana sy fanapahan-kevitra. Tena nanampy ny media sosialy.
Fony niseho ny fanafihana faharoa an'ny Gaza nataon'ny Israeliana ny taona 2012, mbola tany Etazonia nanao ny fiofanako aho. Voadaroka baomba mafy i Gaza ary notandindonin-doza ny fianakaviako. Fa nanam-bitana ny hitsidika toerana sahala amin'ny Kongresin'i Etazonia aho, ny Depatremantam-panjakana, BBC, AL Jazeera English, ary na aiza na aiza nalehako, nampita ny feon'i Gaza aho, isan'izany ny nandritra ny tafatafa nivantana tao amin'ny Huffington Post. Efa nahafantatra ahy sahady ireo olona maro ary nanaraka ahy tao amin'ny media sosialy, noho izany voaray tsara aho, ary namariniko tsara hoe i Gaza ihany koa.
Nanampy ahy hiresaka tamin'ny fianakaviako any Gaza ihany koa ny media sosialy, ary hijanona ho ara-baovao hatrany mikasika ny zava-nitranga tany sady mandefa ireo vaovao ao amin'ny Twitter.
Ny taona 2014, nanao ny fanafihana ratsy indrindra hatrizay tamin'i Gaza i Israely. Nataoko tsara antoka ny fahafahako mijanona ho eo amin'ny Aterineto foana ary manohy mitatitra ny vaovao sady manamarina tsara hoe manana mpihary herinaratra aho, vatoaratra ho an'ny “router”, vatoaratra fanampiny ho an'ny findaiko, fahazoana miditra amin'ny Aterineto eo akaiky eo amin'ny alalan'ny WiFi ary fàhana ampy tsara ho an'ny findaiko mba hahafahana mandefa bitsika amin'ny alalan'ny hafatra an-tsoratra. Nandefa bitsika tao anatin'ireo daroka baomba aho, tahotra, fahaverezan-toky sy loza. Tena tao anatiny tsara mihitsy io ary tsy nisy nosivanina, ary nampihetsi-po ny nahita fa nisy tanora maromaro avy ao Gaza nahazo aingam-panahy tamin'io mba hanao mitovy amin'izany ihany koa. Nasongadina tao amin'ny onjampeo izahay, ireo fandaharan'ny fahitalavitra mandefa vaovao, vohikalam-baovao ary nantsoin'ireo mpanao gazety miasa tena. Nanonona anay ho loharanom-baovao amin'ny fotoana farany ireo masoivohom-baovao lehibe maro ary notononin'ireo olo-malaza izahay ary nitady ny handefa ny fanohanany an'i Palestina izy ireo. Heno hatraiza hatraiza ny feonay, miray ao ambany elatry ny fanaovana gazetin'olon-tsotra.
Mazava ho azy, ny fandrahonana anay no fivoarana natoraly avy amin'izany, fanafihana ao anatin'ny tontolon'ny Aterineto ary fanerena anay hangina. Nisy nisompatra ny emailako, nahantona ny kaonty Twitter-ako taorian'ny nanandraman’ ireo mpisompatra niditra tao, ary tao amin'ny kaonty Facebook-ko feno hafatra fankahalàna sy hafatra manokana avy amin'ny olona mandrahona ny hamono ahy sy ny fianakaviako raha “tsy manakomoba ny vavako” aho. Saingy tsy nijanona anefa aho, satria araka ny nianarako tany amin'ny fampiofanana ahy tany amin'ny Firenena Mikambana, indraindray afaka manova ny tany ny bitsika iray.
Ankehitriny, satria iainan'ny Palestina ilay antsoin'ny sasany hoe Intifada Fahatelo, tafapetraka eny aloha indray ny fanaovana gazetin'olon-tsotra ho loharanom-baovao voalohany ho an'ny vahoaka ary ho an'ireo masoivoho media. Ny marina ihany no tokony ho hindrahindraina.
Sabatra roalela ny media sosialy. Mety ho lasa fampitahorana io fa manosika ny olona iray any amin'ny famonoan-tena; mety hanavotra ny ain'olona iray koa anefa io amin'ny fanampiana ny hafa amin'ny fiainana miandry azy. Lafiny inona no tianao ampiasaina? Mety hanamboatra anao na hamotika anao ny media sosialy. Manainga anao hisafidy amim-pahendrena aho.